နေအိမ်/2017-2/Ribbon Shredder သည်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးရာတွင်ကောင်းမွန်သောအခန်းကဏ္ Pl မှပါ ၀ င်သည်
Ribbon Shredder သည်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးရာတွင်ကောင်းမွန်သောအခန်းကဏ္ Pl မှပါ ၀ င်သည်
W ကhat exactly ribbon shredder is?
Mini machines which make ribbon new style and design of ribbon for gift wrapping. ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး is called ribbon splitter, ဖဲကြိုးဖျက်စီး tool ကို, ribbon slitting tool. Unique style can attract easily, that’s why everyone needs it. In marketsalot of ribbons shredding types are available but we offeragood quality ribbon for ribbon shredder. Buy this you can create curl and wavy style of ribbon.
ဤ website မှတဆင့်, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုပိုပြီးကျက်သရေအပြည့်အဝကိုဖဲကြိုးကောင်းတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ကိုယ့်အမိန့်အဘို့အသငျသညျအမြားဆုံးလိုအပျကွောငျးဖဲကြိုးအမျိုးအစားနှင့်အကျယ်ဖော်ပြ. တစ်ဦးကဖဲကြိုးသင့်လက်ဆောင်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုကြည့်စေရာအခြေခံဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်.
RSPAC ဖဲကြိုး Shredder Tool ကို သင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုထူးခြားတဲ့ကြည့်နှင့်သင့်ထုပ်လူတိုင်းကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့အထူးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စေသည်. ဖဲကြိုးအမျိုးမျိုးအရောင်တွေရရှိနိုင်ပါ. There is four style of ribbon design that is one-sided design, နှစ်ဖက်ဒီဇိုင်း, metal teeth, and plastic teeth. To meet the customer requirements in each design, we also have different colors and size of ribbon.
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|February 22nd, 2017|2017-2|ဟာ Off comments အပေါ် Ribbon Shredder သည်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးရာတွင်ကောင်းမွန်သောအခန်းကဏ္ Pl မှပါ ၀ င်သည်